Daawo Sawirro:-Dayactirka Wadada laamiga ah ee dhaxmarta Magaalada Gaalkacyo oo la bilaabay | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Daawo Sawirro:-Dayactirka Wadada laamiga ah ee dhaxmarta Magaalada Gaalkacyo oo la bilaabay
Radiogaalkacyo: –Magaalada Gaalkacyo eeXarunta gobalka Mudug ka bilaabmay Dacyactirka wadda dhex marta magaaladda Gaalkacyo oo in muudo ah bur-bursanayd. Waddadan oo ah 7.5 KM ayaa shirkadda Dhisaysa waxay sheegtay in 1 KM ay ku dhisayaan muddo Sideed barri ah. Taaso ka dhigan in wax ka yar 70 bari lagu dhisi karo waddan haddii loo dadaalo.
Lacagta ku baxaysa Dacyac tirka waddan ayaa lagu qiimeeyay Hal Malyan iyo dheerad. Taaso inta badan shacaku laga sugayo inay bixiyaan, waxaana ilaa iyo hadda la hayaa oo shirkadda dhisaysa lagu wareejiyay sida xubno xog ogaal ah ii sheegen 44 kun oo ka mid ah 110 kun oo Maamulka Dowladda hoose ee Magaaladda Gaalkacyo ay ku ballan qaadeen shirarkii looga hadlay dhismaha iyo dayactirka wadddan.
Guddiga howshan wadda oo ka kooban 23 Qof oo isku jira Culumma u diin, Ganacsato, Aqooyahan, waxgarad, Haween iyo Dhalinyaro ayaa la filaya in Maalinka Axadda ah ee so socota ay qabtaan shir shirar ay ku so bandhigayaan Qorshaha dayactirka waddan iyo sida shacabku uga qayb qaadan karaan.
Ugu danabayntii, Ma ahan markii ugu horaysay oo barnaamijo iska wax u qabso ah oo Dadku dhaqaalagooda iyo xoogooda ku tabarucayaan laga sameeyo Magaaladda Gaalkacyo, waxaa horay lo sameeyay oo aanan la dhamays tirin Dhismaha Cisbitaalka Gaalkacyo oo ku bur-buray Qaraxii Gaalkacyo ka dhacay 2016-kii iyo Garoonka kubadda cagta Cawaale oo isna howshiisu socoto.
Hoos ka Daawo Sawairo